Ndeupi mwedzi ndiDezember
Chii chinonzi dezember?
Ndeupi mwedzi uri Dezember muchiGerman?
Unoziva here kuti izwi rekuti Dezember rinorevei?
Ndeupi mwedzi wegore uri Dezember?
Izwi reGerman Dezember rinoreva Zvita. Dezember, Zvita, ndiwo mwedzi wechi12 wegore.
Pawebhusaiti yedu, pane mwedzi nemwaka mumitauro yeGerman uye yekuenzanisira. Takadzidza mwedzi weDezember, kana uchida, iwe unogona kudzidza ese emwedzi yeGerman nemwaka weGerman. Dzvanya kuti uwane rumwe ruzivo: Mwedzi yeGerman nemwaka mwaka wechiGerman
Iwe unogona kudzidza chiGerman pamhepo nekutora mukana wezviuru zvezvidzidzo zveGerman pane yedu saiti.
Kutenda nekufarira kwako.